I-Google isebenzisa kanjani ukubonwa kwephethini – Ubumfihlo kanye Nemigomo – I-Google
I-Google isebenzisa kanjani ukubonwa kwephethini ukuze yenze umqondo izithombe.
Amakhompyutha "awaboni" izithombe namavidiyo ngendlela efanayo nabantu Uma ubheka isithombe, ungabona umngani wakho omkhulu ame ngaphambi kwekhaya lakhe. Kusukela ekuboneni kwekhompyutha, leso sithombe esifanayo siyidatha nje ehlangene engathathwa njengomumo nolwazi mayelana namanani wombala. Njengoba ikhompyutha ingeke iphendule ngendlela ozokwenza ngayo uma ubona leso sithombe, ikhompyutha ingaqeqeshelwa ukubona amaphethini athile wombala nomumo. Isibonelo, ikhompyutha ingaqeqeshwa ukubona amaphethini avamile wezimo nemibala enza isithombe se-landscape njengebhishi noma into efana nemoto. Lobu buchwepheshe busiza izithombe ze-Google ukuhlela izithombe zakho futhi kuvumela abasebenzisi ukuthola noma isiphi isithombe ngosesho lwesampuli.
Ikhompyutha ingaqeqeshwa ukubona amapethini avamile wezimo nemibala enza isithombe sedijithali sobuso. Le nqubo yaziwa njengokuthola ubuso, futhi ingubuchwepheshe obusiza i-Google ukuthi ivikele ubumfihlo bakho kumasevisi afana ne-Street View, lapho amakhompyutha azama ukuthola aphinde afiphalise ubuso banoma obani abantu okungenzeka bekade bame emgwaqeni njengoba imoto ye-Street View idlule ishayelwa.
Uma uqhubeka ngokuthuthuka, ubuchwepheshe bokubonwa kwesithombe obufanayo obunika amandla ukutholwa kwesithombe kungasiza ikhompyutha ukuthi iqonde izici zobuso ebutholile. Isibonelo, kungaba namaphethini athile aphakamisa ubuso buyahleka noma bunamehlo avaliwe. Ulwazi olufana nalobu lungasetshenziswa ukusiza izici ezifana neziphakamiso zezithombe ze-Google Photos’ zama-movie neminye imiphumela edalwe kusuka kuzithombe zakho namavidiyo.
Ubuchwepheshe obunjalo futhi bupha amandla isici sokuqoqa ubuso esitholakala ezithombeni ze-Google kwamanye amazwe, okusiza ikhompyutha ukuthola ubuso obufanayo nokubuqoqa, okwenza kubekula ukubasebenzisi ukusesha abasebenzisi ukusesha nokuphatha izithombe zabo. Funda kabanzi mayelana nokuqoqwa kobuso kusikhungo sosizo sezithombe ze-Google.
Kusebenza kanjani ukusesha ngezwi
Ukusesha ngezwi kukuvumela ukuthi unikeze ngombuzo wezwi kuhlelo lokusebenza leklayenti yokusesha kwe-Google kudivayisi kunokuthi uthayiphe lowo mbuzo. Isebenzisa ukubonwa kwephethini ukuze ibhale amagama akhulunyiwe abe umbhalo obhaliwe. Sizothumela ukukhuluma kumaseva we-Google ukuze sibone ukuthi wena utheni.
Ngombuzo wezwi owodwa owenzwe ekusesheni ngezwi, silondoloza ulimi, izwe, inkulumo nokuqagela kwesistimu yethu ukuthi kuthiweni. Sigcina izinkulumo ukuthuthukisa amasevisi wethu, okufaka ukuqeqesha isistimu yokubona kangcono umbuzo olungile wokusesha. Asithumeli noma yikuphi ukukhulunywa ku-Google ngaphandle kokuthi ukhombise ukuba uhlose ukusebenzisa ukwazi kokusesha ngezwi (njengesibonelo, ukucindezela isithonjana semakrofoni kubha yokusesha ngokushesha kukhibhodi ye-intanethi noma ukuthi "Google" uma ibha yokusesha ngokushesha ibonisa ukuthi ukwazi ukusesha ngezwi kuyatholakala).